Lalao toa ny PUBG (2020) - Top 4 safidy - Lalao
Ianao mitady lalao mitovy amin'ny PUBG?Androany, tonga amin'ny toerana mety ianao. Hiresaka momba ny lalao tsara indrindra azonao lalaovina isika fa tsy PUBG. Ireo lalao ireo dia mitovy amin'ny PUBG amin'ny lafiny lehibe, ary ny lalao sasany maneran-tany no lalao avo indrindra.Noho izany, andao hiroboka ao anaty lahatsoratra, ary andao jerena ireo lalao toa ny PUBG.
Lisitry ny safidy PUBG tsara indrindra amin'ny taona 2020:
Mety ho hitanao ny Call of Duty: Warzone mihetsika eo amin'ilay lisitra. Call of Duty Warzone dia mpilalao shooter Battle-Royale voalohany miaraka amina mpilalao 150 ary nanjary nalaza be tamin'ny sary sy lalao mahafinaritra. Warzone dia miaraka amin'ny sari-tany mahavariana, ao anatin'izany ny fampiasana Great Weapon. Ny faritra rehetra amin'ny lalao dia tena voaorina tsara, ary ny lafiny fangorahana rehetra dia karakaraina.
Izaho manokana dia tianay ny lalao satria manararaotra hiditra amin'ny lalao ianao aorian'ny fahafatesanao; amin'ny fandresena ao amin'ny Gulag, toerana anaovana ady tokana, azonao atao aza ny mamerina ny mpiara-miasa aminao avy any amin'ny gara Buy izay miparitaka eraky ny sari-tany.
Call of Duty aza dia misy mode iray hafa, izay antsoina hoe Plunder. Amin'ity maody ity dia mila manangona vola mitentina 1 tapitrisa dolara ianao, miparitaka manerana ny sari-tany. Ny ekipa izay manangona ny vola aloha rehefa avy niady tamin'ny fahavalo rehetra dia nandresy. Raha te hampidina ny Call of Duty: Warzone ianao dia azonao atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny fipihana Eto .
Fortnite dia lalao iray hafa an'ny Battle Royale izay malaza manerantany. Ity lalao ity dia manana sary izay samy hafa tanteraka amin'ireo Battle Royale hafa rehetra eo an-tsena. Fortnite dia manana fomba mavitrika amin'ny resaka sary, sary ary lalao. Azonao atao ny manangana rafitra maimaim-poana amin'ity lalao ity amin'ny fanangonana ala, biriky ary metaly hananganana sakana eo aminao sy ny fahavalonao. Ity Battle Royale ity dia eo anelanelan'ny mpilalao zato ary ilay tafavoaka velona farany no naka ny Victory Royale.
Ny antony mahatonga an'i Fortnite ho malaza dia noho ny vanim-potoana iainany sy ny tantara namboarin'ny mpamorona ny Fortnite. Amin'izao fotoana izao, Fortnite dia nahavita ny hetsika lehibe indrindra izay niarahan'izy ireo niasa tamin'ny Marvel Cinematic Universe. Izy ireo izao dia manana ny Season 5: teboka Zero amin'izao fotoana izao, izay nahavita fanovana lehibe teo amin'ny Maps, Guns, ary Battle.
Fortnite dia manana maody lalao efatra an'ny Battle Royale, dia ny Solo, Duos, Trios, ary Squad. Manana fomba LTM samy hafa koa izy ireo izay miova tsy tapaka matetika. Misy fomba iray, izay antsoina hoe Creative. Amin'ity fomba ity dia afaka mamorona efitrano natokana ho an'ny namanao ianao ary milalao tsirairay amin'izy ireo. Azonao atao ny misintona maimaim-poana ity lalao ity amin'ny fipihana Eto .
3. Apex: Angano
Apex Legends dia lalao izay novolavolain'ny mpamorona ny Titan Spawn, Respawn. Respawn dia naka ny hetsika fototra, mikoriana ary mitifitra avy any Titanfall ary nametraka izany tao amin'ny lalao Battle Royale kely kokoa.Ny sary an'ny angano Apex dia tena zava-misy ka toa tanteraka amin'ny lalao FPS maoderina.
Ny hevitr'ity lalao ity dia ny miditra an-tsehatra amin'ny ekipanao amin'ny sarintany amin'ny alàlan'ny fisorohana ny faribolana mihena sy ny famonoana ny fahavalo handresenao ny fandresenao. Misy endri-tsoratra samihafa amin'ny lalao antsoina hoe Legend. Samy manana fahaizana manokana azo ampiasaina amin'ny lalao. Ity lalao ity dia manana fomba hafa toa an'i Solo, Duos, ary trios. Mampalahelo fa ity lalao ity dia tsy manana fanohanana amin'ny lalao squad.
Ny basy ampiasaina amin'ny Apex Legends dia tena milay; eo am-pitifirana dia ahitanao ny ra mivoaka avy amin'ny fahavalonao, izay manome azy fomba azo tanterahina. Ny lalao dia tsy manana keybindings sarotra. Mora azo ny mahatakatra sy ny Ace ao amin'ny lalao. Azonao atao ny misintona Apex: Legends amin'ny fipihana Eto .
4. Vovonan'ny Elysium
Oh, izao ny lalao Crazier Rings an'ny Elysium Battle Royale dia tonga teny an-tsena mba hanavaka ny tenany amin'ny PUBG. Miaraka amin'ny sarintany goavambe sy fotoana farany mampientam-po ary mamorona fomba fijery vaovao momba ny hetsika, Tencent's Winter-themed Rings of Elysium, izay vao avy namoaka lohateny fidirana voaloham-pirinty, izay mahatonga azy ho miavaka.
Mpilalao 60 isan-karazany no nifanandrina mba hialana amin'ny tafio-drivotra mahafaty izay manimba ny tendrombohitra sy ny manodidina. Na izany aza, ny faribolana dia manafangaro ny fomba fivezivezanao manomboka amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B miaraka amin'ny sari-tany manasongadina ny fiakaran'ny lanitra, ny snowboard, ny glider-tanana ary ny fiakarana an-tendrombohitra izay ahitana sary an-tsaina mampiavaka ny karazana. Ity lalao ity dia mety ho toy ny royale ady nentim-paharazana. Lalao maimaim-poana ity hilalao ity izay azo sintonina amin'ny fipihana Eto .
Ka ity dia lahatsoratra fohy amin'ny lalao toy ny PUBG azonao lalaovina. Ity lisitra ity dia misy lohateny filokana tsara indrindra azonao lalaovina fa tsy PUBG. Ka inona no andrasanao? Mandehana ary sintomy ny lalao tianao, ary ampahafantaro anay izay lalao ho alainao sy hilalaovanao ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany.
xbox iray kaody fisintomana maimaim-poana
mpamorona kaody roblox maimaim-poana
hira inona no tiako henoina
stream tv series online maimaim-poana
mijery fizarana fahitalavitra maimaimpoana maimaimpoana